हरेक बच्चा र वयस्क कम्तिमा एक पटक, तर acetaminophen समावेश लागूऔषधको प्रयोग संग सामना गर्नुपरेको थियो। यो उपकरण भन्दा साधारण र किफायती को छ। तथापि, सबैले दबाइ विभिन्न dosing हुन सक्छ थाह छ। यस लेखमा हामी "Paracetamol 325" के हो केन्द्रित हुनेछ। प्रयोगको लागि निर्देशन तल वर्णन गरिनेछ।
यो उत्पादन के समावेश छ र यसलाई कुनै पनि रूप मा उपलब्ध छ?
औषधि "Paracetamol 325" - ट्याब्लेटको। निर्देशन मुख्य संविधान घटक paracetamol छ भनेर भन्छन्। साथै, दवादारू वर्तमान excipients हुन सक्छ। तर, यो चक्की जारी को फारम मा निर्भर गर्दछ। यस ट्याब्लेटको एक दानाको खोल, चाँडै पेट मा दबाइ पठाएमा र पहिले नै त्यहाँ घुल जो हुन सक्छ। पनि बिक्री मा तपाईं सामान्य कुनै न कुनै गोली "Paracetamol 325" पाउन सक्नुहुन्छ। तयारी यस प्रकारको गर्न प्रयोगको लागि निर्देशन सामान्यतया अलग आपूर्ति वा सीधा प्याकेजिङ्ग मा संकेत गरिएको छ।
जब तपाईं दबाइ प्रयोग गर्न आवश्यक?
केही अवस्थामा, "Paracetamol 325" को एक माध्यम सल्लाह दिन्छन्? निर्देशन गर्ने चिकित्सा उत्कृष्ट relieves ज्वरो र दुखाइ छ भनेर भन्छन्। साथै, दबाइ अलिकति विरोधी भडकाऊ प्रभाव हुन सक्छ। प्राप्त गर्न गवाहीलाई निम्नानुसार छन् किन हो:
वयस्क र बच्चाहरु मा ज्वरो;
टाउको दुखाइ र मांसपेशी दुखाइ ;
दन्त दुखाइ र माइग्रेन;
भडकाऊ प्रक्रिया शरीर तापमान मा वृद्धि र यति मा कारण छ कि।
दबाइ "Paracetamol 325" निर्देशन बारे भन्छन्, उपकरण antiviral र जीवाणुरोधी कार्य छैन। यसलाई त्यसैले अक्सर रोग प्रक्रियाहरू को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ संयोजन चिकित्सा मा।
एजेन्ट साधारण व्यक्ति औषधिको खुराक मा प्रबन्ध छ। यस मामला मा, प्रत्येक रोगी व्यक्तिगत चार्ट र पाठ्यक्रम सुधार को अवधि चयन गरियो। तर, दबाइ को आत्म आवेदनमा केही सीमितता छन्। सधैं निर्देशनहरू मा सूचीबद्ध छ कि जानकारी विचार गर्नुहोस्।
सार दबाइ 10 15 प्रति रोगी शरीरको वजन को किलोग्राम मिलीग्राम को एक खुराक मा लिइएको छ भन्ने संकेत गर्छ। एक व्यक्ति 60 किलो वजन भने, उहाँले 600 900 दबाइ को मिलीग्राम देखि लाग्न सक्छ। एक ट्याब्लेट, तपाईंले थाहा रूपमा सक्रिय पदार्थ को 325 मिलीग्राम समावेश गर्दछ। यसबाट, यो एकल खुराक 1-3 दाना छ कि अन्तमा गर्न सकिन्छ। प्रक्रिया गर्न सक्दैन4भन्दा घन्टा दोहोर्याउनुहोस्। तसर्थ, दैनिक खुराक 60 प्रति किलोग्राम मिलीग्राम भन्दा बढी हुँदैन। 60 किलो रोगी वजन दबाइ को आफ्नो दैनिक भाग 10 भन्दा बढी ट्याब्लेटको नहुन सक्छ।
बच्चाहरु मा दबाइ छ?
यसलाई "Paracetamol 325" छोराछोरीलाई निर्देशन को एक माध्यम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। तर, यो दबाइ को निर्दिष्ट औषधिको खुराक पालन गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, बच्चा 10 किलो वजन भने, एकल खुराक दबाइ को 100-150 मिलीग्राम हुनुपर्छ। यो तेस्रो वा ट्याब्लेट को एक चौथाई बारेमा छ।
यो विभाजन कुनै न कुनै पाटी, दाना र granulated रोज्न राम्रो छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। अन्यथा, तपाईं बस एक खुराक miscalculate गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनको र सबै लागत मा पहिलो वर्ष को लागि दबाइ को एक वैकल्पिक फारम चयन गर्न। सबैभन्दा सुविधाजनक छन् rectal suppositories, 100 प्रति दानाको सक्रिय संघटक को मिलीग्राम को एक खुराक छ जो।
के गर्भवती महिला र सुत्केरी आमाहरू बारेमा?
यो अवधिमा दबाइ "Paracetamol 325" निर्देशन प्रयोग गर्न अनुज्ञेय छ? सार दबाइ को उपयोग को संभावना संकेत गर्छ। डाक्टर यस दबाइ सबैभन्दा expectant र नर्सिङ आमा को लागि अहानिकारक मध्ये एक छ भन्छन्। यो सक्रिय पदार्थ र कम खुराक दाना सुरक्षित कारण हो।
सामान्य व्यवहार मा, दबाइ प्रति ट्याब्लेट 500 मिलीग्राम को राशि मा प्रयोग गरिन्छ। अक्सर expectant आमा दानाको आधा मा लिइरहेका छन्। त्यसैले, यसलाई "Paracetamol" ट्याबलेटका (325 मिलीग्राम) को डर बिना प्रयोग गर्न सम्भव छ।
निर्देशन पुन: लिएर सकारात्मक गतिशीलता को अभाव मा दबाइ गर्न अनुमति छ।
यो औषधीले केही contraindications छ। को सुधार पूरा गर्दा तिनीहरूले छलफल हुनुपर्छ।
तीव्र रूप मा कलेजो को रोगहरु र अन्तस्करणले मा ट्याब्लेट लिन छैन। साथै, रगतको केही pathologies मा आवश्यक यस्तो उपचार इन्कार छ। paracetamol गर्न संवेदनशीलता त्यहाँ वृद्धि भएको छ भने, यो कडाई गर्ने चिकित्सा पिउन निषेध गरिएको छ।
दबाइ अज्ञात मूल को पेट दुखाइ संग प्रयोग गर्नु हुँदैन। अन्यथा, तपाईं नैदानिक तस्वीर greased कारण जोखिम। यस मामला मा डाक्टर, दायाँ निदान र उपचार राख्न सक्षम हुने छैन। त्यहाँ intestines मा सुनिंनु छ भने, यो विशेष गरी rectal suppositories को रूप मा, लागूऔषधको प्रयोग हटाउन पनि आवश्यक छ।
साथै, आफ्नै औषधिको खुराक भन्दा बढी छैन। यो भयातुर प्रणालीमा नकारात्मक प्रतिक्रिया, पाचन पर्चा र अन्य अङ्गहरू हुन सक्छ।
कसरी लामो र यो दबाइ को कार्य हुँदा?
तुरुन्तै ट्याब्लेटको लिएर पछि रगत मा आफ्नो सक्रिय अवशोषण सुरु हुन्छ। एक घण्टा पछि, राहत को राज्य छ। एकै समयमा जो तपाईंले छुटकारा चाहनुहुन्छ महत्वपूर्ण भूमिका लक्षण को प्रकारको, खेल्छ।
त्यसैले, टाउको र जब दाँत दुखाइ रोगी मात्र 15-20 मिनेट पछि राहत महसुस। कार्य ट्याब्लेटको धेरै लामो हुन सक्छ। अक्सर रोग को पुन प्रकटीकरण सबै उठ्छन् छैन।
एक विशेष औषधिको खुराक मा दबाइ को तापमान कम गर्न जसको कार्य बारे एक घण्टा मा हुन्छ, लिइएको छ। जवान छोराछोरीको, ज्वरो बारेमा 5-8 घण्टा पछि पुनरावृत्ति हुन सक्छ। वयस्क जो आवश्यक लक्षण नै फेरि केहि पहिले प्रकट हुनेछ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार गर्न।
उत्पादन मुख्यतः मूत्र मा अन्तस्करणले मार्फत र मलको मा हो।
प्रवेश लागि सिफारिसहरू
तल "Paracetamol 325" कार्रोप्नेटेड पेय पदार्थ, रस वा कफी कहिल्यै धुन।
यसलाई खानाको पछि तुरुन्तै चिकित्सा लिन बेहतर छ।
उपचार lactation समयमा बाहिर छ भने, त्यसपछि अर्को खुराक लिन हुँदैन तुरुन्तै बच्चा खुवाउने पछि।
प्रतिकूल प्रतिक्रिया को घटना मा सुधार रद्द र आपतकालीन चिकित्सा ध्यान खोज्नुपर्छ।
दबाइ दिन को समयमा तपाईंलाई मदत गर्दैन भने, यो खुराक वृद्धि गर्न आवश्यक छ। डाक्टर मदत माग्नुहोस्।
माथि एक्लै तीन महिना नवजात शिशुहरु मा उपकरण प्रयोग नगर्नुहोस्।
तपाईं अब "Paracetamol 325" तयारी सजग छन्। प्रयोग, औषधिको खुराक, निर्देशन र माथि वर्णन संरचना। मतलब safest antipyretic र analgesic लागूऔषधको छ। यो आपतकालीन सहायता प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ किन छ। तथापि, तपाईं सधैं दबाइ को औषधिको खुराक खातामा लिनुपर्छ।
ट्याब्लेटको "Paracetamol 325" को रूपमा लिनु हुँदैन भन्दा बढी तीन दिन antipyretic। साथै, सुधार तपाईं एक analgesic दबाइ रूपमा संरचना प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, पाँच दिन भन्दा पछिल्लो हुँदैन। अक्सर, दबाइ मानव अवस्थाको एक समय राहत लागि प्रयोग गरिन्छ। यो चिकित्सकहरु निषेध छैन। तर, हामी खुराक को विकल्प संग धेरै सावधान, होसियार हुनुपर्छ। ठीक उपचार र बिरामी छैन!
विषाक्तताका लागि प्रभावकारी एंटीबायोटिक्स
औषधि "भिजिलिप"। प्रयोगको लागि निर्देशन
ब्रिटिश को conservatism: इङ्गल्याण्ड को परम्परा
को फास्ट इथरनेट प्रविधि कसरी
कागज को bouquet कसरी गर्न? कसरी आफ्नै हातले कागज को एक फूलगुच्छा बनाउन
एक Doberman को वर्ण मा व्यक्त रूपमा
उत्तरी अफ्रीका: अल्जेरिया। खनिज, प्राकृतिक क्षेत्रहरु, ठूलो नदी
इटालियन कलाकार Mikelandzhelo Karavadzho: एक जीवनी, रचनात्मकता